Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha Hogaanka Arimaha Bulshada oo kulan la qaatay xubnaha jaaliyadda Nebraska
Gudoomiyaha Hogaanka Arimaha Bulshada oo kulan la qaatay xubnaha jaaliyadda Nebraska
Waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 03/24/2012 waxaa shir isugu yimid xubnaha maamulka jaaliyada Ogaadeeniya ee gobolka Nebraska kuwaas oo kakala yimid dhamaan degmooyink uu ka kooban yahay gobolku sida Grand Island, Lexington, Sioux city iyo Omaha. Shirkaan oo lagu qabtey hallka shirarka ee Grand Island Public Library ayaa waxaa ka soo qaybgalay Hogaanka arimaha bulshada iyo Abaabulka HAAB Mudane Maxamed Cabdi Yaassin (Diirane) oo ay lasocdeen madaxa gobolada Midwest Mudane Axmed Rafle iyo Gudoomiyaha OYSU Mudane Farxaan Axmed.
Gudoomiyaha HAAB oo maalmahanba booqasho hawleed ku maraya Waqooyiga Ameerika ayaa warbixin dhinacyo badan taabaneysa siinayey xubnihii Jaaliyadaha Ogaaadeeniya ee kulamada gaar gaarka ah la yeelanayay. Shirkan jaaliyadda Nebraska ayaa qayb ka ah hawlaha uu hogaanka u tagay Mareykanka.
Mudane Diirane ayaa ku siiyey xubnaha jaaliyadda seminar ku saabsan habka maamulka iyo doorka jaaliyadaha ay ka qaataan halganka uu shacbiga Ogaadeeniya ku doonayo xaqa aayo katashigiiga.
Seminaarka kadib wuxuu Godoomiyaha HAAB dhegeystay rayiga iyo soo jeedintii xubnaha isaga oo uga Jawaabey wixii su,aalo ahaa ee ay qabeen. Hogaanka HAAB oo mudadan dambe howlo Koormeer iyo seminaaro isugu Jira u joogay wadanka Mareykanka ayaa xalay fiidkii u ambabaxay magaalada Kansas city ee gobolka Missouri Halkaas oo uu godoomiyuhu kula shiri doona maalinta Axada ah xubnaha Jaaliyada ee gobolkaas.